Fivondronamben'ny Federasiona Ranomasimbe Indiana - ss 2t l0613 lak
Voavela heloka, kanefa tsy mamela heloka
Alakamisy 09 May
Vakio ny Jônà 4. Inona ireo lesona manan-danja tsy maintsy nianaran’i Jônà teto? Tamin’ny fomba ahoana no nisehoan’ny fihatsaram-belatsihiny?
Mampiseho toe-javatra hafahafa manaitra momba ity mpaminany ity ny Jônà 4. Toa naleony ho faty toy izay hijoro ho vavolombelon’ny fahasoavana sy ny famelan-keloka avy amin’ Andriamanitra. Raha toa ka faly izy talohan’izao noho ny nanavotana azy tamin’ny fahafatesana (Jôn. 2:7–9), izao kosa raha novelomina i Ninive, dia aleony ho faty (Jônà 4:2,3).
Mifanohitra amin’ny toetran’i Jônà ny toetran’ Andriamanitra; asehon’ny Baiboly ho Ilay tsy mankasitraka “ny hahafatesan'ny ratsy fanahy” (Ezek. 33:11) Izy. I Jônà sy maro amin’ireo mpiara-belona aminy dia faly noho ny famindrampon’ Andriamanitra amin’ny Isiraely manokana, kanefa ny fahatezeran’ Andriamanitra no nirin’izy ireo ho an’ireo fahavalony. Kianin’ny hafatra raketin’ny bokin’i Jônà mafy ny toetra mafy fo tahaka izany.
Inoa ireo lesona sasantsasany azontsika ianarana avy amin’ny fahadisoan’i Jônà? Nahoana no mety hanimba ny fijoroantsika Kristianina ho vavolombelona ny hevitra mibahana mialoha?
Marina ny fanamarihana hoe boky tari-dalana mampianatra ny fomba atao mba tsy ho mpaminany ny bokin’i Jônà. Mpaminany nanana saina mikomy sy tsy mahalala ny tena laharam-pahamehana i Jônà. Tsy voafehiny ny faniriany hamaly faty. Tery saina sy mora tezitra izy. Tokony ho faly noho ny fahasoavana nasehon’ Andriamanitra tamin’ireo Ninivita izy, kanefa dia navelany hanjaka ny fitiavan-tenany sy ny avonavona manafintohina ka nahatonga azy ho feno lolom-po.
Faniriana ho faty no tenin’i Jônà farany (Jônà 4:8,9), fanantitranterana ny fahasoavany tsy hay refesina, manome fiainana, kosa no tenin’Andriamanitra farany.
Navela hisokatra tsy misy fiafarany ny bokin’i Jônà. Ny andininy famaranana ao dia mametraka fanontaniana iray lehibe ao an-tsain’ny mpamaky, fanontaniana izay tsy novalin’ny mpanoratra: Nitondra fiovam-po tanteraka tao amin’i Jônà ve ny fiovam-po mahagaga tao Ninive?
Betsaka ny zavatra ao amin’ny tantaran’i Jônà izay saro-takariny, indrindra fa ny momba an’i Jônà manokana. Na izany aza, ny lesona mazava indrindra azo tsoahina angamba dia ny hoe mihoatra noho izay heverintsika ny fahasoavana sy ny famelan-keloka avy amin’Andriamanitra. Fomba ahoana no ianarantsika hamindra fo sy hamela heloka ireo izay tsy mendrika izany, tahaka izay nataon’Andriamanitra teto tamin’i Jônà sy ireo Ninivita?